WhatsApp dị ala gburugburu ụwa ma na-aga ogologo oge | Akụkọ akụrụngwa
N'ịbụ ndị ọtụtụ ndị hụrụ n'anya, ndị ọzọ kpọkwara asị, WhatsApp abụrụla ụzọ isi kwurịta okwu n'etiti ọtụtụ n'ime ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ na-eji ọrụ ozi ngwa ngwa WhatsApp ugbu a. Mana ruo awa ole na ole, ịdabere na WhatsApp nke ụfọdụ ndị ọrụ tara ahụhụ na-amalite ịbụ nsogbu ọnọdụ, ebe ọ bụ Sava WhatsApp akwụsịla ịrụ ọrụ gburugburu ụwa. Eeh, WhatsApp enweghi ike inweta onye ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ ha. Ọrụ ahụ Ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ ma na ngwaọrụ mkpanaka na ọrụ ntanetị dị egwu nke ọ na-enye anyị.
Dị ka ọ dị na mbụ, WhatsApp ekwupụtabeghị ihe bụ ihe kpatara ya. Onwebeghi ka o ghotara na nsogbu di, ma obu ihe ozo odi nkpa. Ihe niile na-egosi n'eziokwu na ọzọ sava ndị ụlọ ọrụ na-eji enye ọrụ a n'efu na-enwe ụfọdụ ụdị nsogbu, nsogbu na-emetụta onye ọ bụla na nke ahụ ọ nwere ike ibute ngbanwe izugbe nke ọrụ nke ọrụ ahụ, nke ga-aghọ igwe ojii.
Dị ka ọ na-eme n'ụdị mkpọka nke ọrụ izi ozi kachasị eji eme ihe n'ụwa, asọmpi a ga-agbanye aka ha, ọkachasị Telegram, usoro izipu ozi kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa taa. Social media na-ejupụta Ọ bụghị naanị na memes metụtara ọdịda a, mana GIF juputara na ya nke ndị ọrụ gosipụtara nkwenye ha na-ata ahụhụ mgbe ha na-enweghị ike iji ọrụ izi ozi kachasị amasị nke ndị ọrụ ijeri 1.200.
Ọnọdụ banyere WhatsApp outage
[Mmelite]: Usoro ahụ agbaghaala ọtụtụ oge na awa ole na ole gara aga na ntanetị na-aga n'ihu. WhatsApp amaraworị nsogbu ahụ na nke ya Mark Zuckerberg kwuputara ya na akaụntụ Facebook ya
Maka oge ahụ anyị amaghị mgbe a ga-emegharịrị sistemu a n'ụzọ doro anya ma mezie nsogbu a. Anyị ga-aga n'ihu igosi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » WhatsApp dị ala n'ụwa niile ma ọ ga-aga ogologo oge
Aga m alaghachite azụ
Nwanyị m ochie achọtala m
Zaghachi Jorge Ovando
Ihe ọ bụla na-abịa ma na-aga Netflix, Movistar + na HBO na Mee a